စိုင်းစိုင်းလားရှိုး ( ရှင်ရဲထွတ် ): August 2009
Sunday, August 23, 2009 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 11:25 PM
မွေးလတူ တိုက်ဆိုင်သော မောင်နှမ သီဟ၊ နောင့်၊ နွေး...... ကဗျာ မပီ စာမမှီပေမဲ့ ဒီကဗျာနဲ့ လက်ဆောင်လေး ပေးလိုက်ပါတယ်။
Saturday, August 22, 2009 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 7:06 AM
ဖွားနှစ်တူ ထိုသူ နှစ်ဦးမှာ
ကာတွန်း ဆရာ ကံချွန်လိုက်တယ်
1945 ခုနှစ်တွင် နှစ်ခြင်းတူ ဖွားမြင်ခဲ့၍၊ 2009 ခုနှစ်တွင် နှစ်ခြင်းတူ ကွယ်လွန်ရှာသော၊ မန္တလေးနွယ်ဖွား ထို ဆရာ နှစ်ဦးအား ဤ ( ၆၄ ) ဟူသော ကဗျာ တစ်ပုဒ်ဖြင့် ၀မ်းနဲစွာ ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။ ဆရာ နှစ်ပါး ကောင်းရာ သုဂတိ လားပါစေ။
Tuesday, August 18, 2009 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 7:46 AM
'' ချစ်တယ် '' တဲ့
Monday, August 17, 2009 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 6:42 AM
ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အားလုံးပေါ့.... ရုပ်ရည် ရူပကာ လှပသောသူ၊ ရွက်ကြမ်းမှာ ရေကျိုနေသူ၊ အကျည်းတန် ပုံဆိုးနေသူ၊ သူသူ ငါငါ အားလုံး ( မှန် ) ကြည့်ဖူးကြမှာပါနော်.....။
တစ်ချို့တစ်ချို့တွေဆို ခဏခဏကြည့်ကြမယ်။ တစ်ချို့ကြတော့လဲ နှစ်ခါ သုံးခါ ကြည့်ဖြစ်ကြမယ်။ မှန်ကို ကြိုက်ကြ တဲ့ အပေါ်မှာ မူတည် မယ်ထင်တယ်။ အိပ်ခန်းထဲက မှန်ကို ကြည့်မယ်။ ရေချိုးခန်းထဲက မှန်ကို ကြည့်ကြမယ်။ စလင်းဘတ်ထဲက မှန်ကို ထုတ်ကြည့်မယ်။ ပုံရိပ်ထင်တဲ့ မှန်ဆိုလဲ လမ်းလျှောက်ရင်းလဲ ကြည့်ကြမယ်။ ( MRT မှာဆိုရင် တပိုတပါး မသွားချင်ပဲ မှန်ကြည့်ချင်လို့ TOILET ၀င်သူ တွေလဲ ရှိမှာပဲ
တစ်ကယ်တော့ မှန်ကို ကြည့်ကြတာ မဟုတ်ဘူး။ အတ္တတွေ ထုံမွှမ်းထားတဲ့ ကိုယ့်ရုပ်ကို ကိုယ်ပြန်ကြည့်တာ။ အတ္တက လွှမ်းမိုးနေတော့ ကိုယ့်ရုပ်ကိုတော့ လှနေကြတာပဲဗျ။ မျက်နှာလေးကို ဘယ်လိုလေး ထားလိုက်ရင်ဖြင့် ဘယ်လိုလှတဲ့ အမူအရာတွေ၊ ဘယ်လိုလေး ပြုံးလိုက်ရင်ဖြင့် ဘယ်လိုနှစ်လိုဖွယ် ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ အပြုံးတွေ၊ အ ပေါ်ယံလေးတွေကို စောကြောနေကြတာလား ?
တစ်နေ့တစ်နေ့ ကြည့်လိုက်ရတဲ့ မှန်၊ ရိုးမသွားဘူးနော် ဟိုး လှတပတ အရွယ်ကနေစပြီး အိုမင်းရင့်ရော် သွားတဲ့ အချိန်ထိအောင် ကြည့် နေကြတယ်။ တခါတလေ ပုံစံ တစ်မျိုးလေးနဲ့ မှန်ကို ကြည့်ဖူးလား ? မြင်နေရတဲ့ ကိုယ့်ရုပ် ကို ထွင်းဖောက်ပြီး ဟိုး အတိတ်ကို မြင်ယောင် ကြည့်( ငါဘာတွေများ လုပ်ခဲ့ပြီးပြီလဲ ? )ပစ္စုပန်ကိုကြည့် ( ငါဘာ တွေလုပ်နေလဲ ? ) အနာဂါတ်ကို မျှော်ကြည့် ( ငါဘာဆက်လုပ်မှာလဲ ? ) အဲဒီလို မှန်ကို ကြည့်ပြီး ဒီလို မေးခွန်းမျိုး ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးခဲ့ဖူးသလား ? တွေးမိဖူးသလား ?
သမားရိုးကျ အနေနဲ့ကြည့်ရင်တောင် တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ မတူညီနိုင်တဲ့ မျက်နှာပေါ်က ပုံရိပ်ကို သတိထားမိမှာပါ ( သတိထားမိ ကြလား ? )
စိတ်တည်ငြိမ်ပြီး အေးချမ်းနေရင် မျက်နှာမှာ ကြည်လင်နေမယ်။ စိတ်ပူလောင် ခံစားနေရရင် မျက်နှာမှာ ပူ လောင်နေမယ်။ မိမိရဲ့ မျက်နှာ ပေါ်မှာ ထင်ဟပ်နေတဲ့ ပုံရိပ်တွေဟာ မိမိရဲ့ လုပ်ရပ်ကနေ အခြေခံလာတာပဲ။
တစ်နေ့တစ်နေ့ ကြည့်နေကြတဲ့ မှန်ကို ရဲရဲ ၀ံ့ဝံ့နဲ့ ကြည့်နေနိုင်အောင်၊ ကြည်ကြည် လင်လင် ပုံရိပ်ထင်အောင်၊ အ ခြေခံထားတဲ့ အတွင်း သဏ္ဍန်ကို မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ဖို့ လိုမယ်....... အားလုံးကိုလဲ မှန်ကို မှန်အောင်ကြည့် တတ် ကြပါစေ..။
စာရေးသူ ကျွန်တော်လဲ မှန်ကို ကြိုက်နှစ်သက်သူ တစ်ယောက်ပါ( အကျည်းတန် မှန်ကြိုက်ဆိုတဲ့စကားတယ်မှန် တာပဲ ။ ဤကား စကားချပ် )
Thursday, August 13, 2009 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 8:31 PM
ကျွန်တော် ဒီပို့စ်ကို ရေးမယ် ရေးမယ်နဲ့ လုပ်နေတာကြာပြီ ခုမှပဲ ရေးဖြစ်တော့တယ်။ ဒီပို့စ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး နဲနဲ တော့ အငြင်းအခုံ ဖြစ်လာ နိုင်တယ်။ မတတ်နိုင်ဘူး ငြင်းလာရင်လဲ ရှင်းယုံပဲပေါ့ ဆိုတဲ့ မရဲတရဲ အတွေးနဲ့ပဲ ရေးပြီ ဗျာ။ တိုက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့ သူများ ဒီနေရာကနေပဲ (လွန်တာရှိခဲ့ရင်လဲ ၀န္ဒာမိပါလို့)
ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေ (လူသားတွေနဲ့ ချီပြီး စကားလုံးထွားတာ မဟုတ်ပါဘူး) သီးချိန်တန်သီး၊ ပွင့်ချိန်တန်ပွင့် ဆိုတဲ့ စကားဟာ မှန်ကန် တယ်လို့ ထင်မိသလား ? သေချာတာက အရွယ်လေး ရောက်လာရင် ရင်ခုန်တတ် လာကြတယ်။ ဆန့်ကျင်ဖက်ကို စိတ်ဝင်စား (စိတ်ကစား တတ်လာကြတယ်) စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူ/သူမ တွေ့ခဲ့ ကြရင် သူလေး အကြောင်းကို လေ့လာတတ် ကြတယ်။ သမိုင်းပေး တာဝန်အရ ဆိုခဲ့ရင် ကောင်လေးကပဲ စကား လုံးေ တွ လုပ်ရပ်တွေ ဟန်ရေးပြကြတာပေါ့။ မိန်းခလေး ဘက် ကတော့ စည်းဘောင်ထဲက လှုပ်ရှားကြရတာ ဆိုတော့ ....
ကဲပါဗျာ လိုရင်းကို မရောက်နိုင်တော့ဘူး။ သေချာတာ တစ်ခုက ပိုးကြတယ်၊ ပန်းကြတယ်၊ ချစ်ခဲ့ကြတယ်၊ ဘ၀ တစ်ခုကို တည် ဆောက် ဖို့လဲ ဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်။ သင်ဟာ သူမကို ချစ်မိပြီဆိုကတည်းက လက်တွဲ ချင် တယ် နော်။ (တစ်ကယ်ချစ်တဲ့သူသာ ညွှန်း ၏) ဟုတ်ပြီ သင့် အတွေးထဲမှာရော အသိထဲမှာရော သင့်ဘ၀ကို သူမ၏ လက်ထဲ ၀ကွက် အပ်ချင်တယ်၊ (ဟုတ်တယ်နော်) သူ့ဘ၀ကိုရော သင် အပိုင်စိုး ချင်တယ် ဒါသဘာဝပါ။
ခုခေတ်ကာလ အနေအထားအရ စာပေးစာယူ အရမ်းမြန်ဆန် နေတဲ့ခေတ်မှာ သင်ဟာ သင့်ချစ်သူ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ စာတိုက်ပုံး သော့ကို လို ချင်ခဲ့ ဖူးသလား ? အတင်းတောင်းဆိုခဲ့ ဖူးသလား ? သင့်အနေနဲ့ တောင်းဆိုခဲ့ဖူးမယ်၊ စာတိုက်ပုံးကိုလဲ ကြိုက်တဲ့ အချိန် ၀င်ဖွင့် နိုင် တယ် ဆိုပါစို့။ သင်ဟာ ဘာကြောင့် ဒီလို လုပ်ရပ်မျိုးကို လုပ်ချင် တာလဲ ? အရိုးရှင်းဆုံး တွေးကြည့်လိုက်ရင် သင်ဟာ သင့်ချစ်သူ အပေါ် မယုံကြည်လို့လား ? သူဟာ သင်ရွေးချယ် ခဲ့တဲ့ သင့်ချစ်သူပါ။
အားလုံးလဲ သိကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အရင်ကာလ တစ်ခုက စာပေး စာယူဆိုတာ စာအိတ်နဲ့ နာမည်နဲ့ လိပ်မူ ပြီး ပို့ကြ၊ ဆက်သွယ်ကြ ပါတယ်။ စာပို့သမားလာရင် လက်ခံမယ့် ကာယကံရှင် ရှိမနေခဲ့ရင်တောင်မှ ရှိတဲ့လူက လက်ခံထားပေးပြီး ကာယကံရှင် လက်ထဲ ကို မူမယွင်းပဲ အပ်နှံကြရပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာကို ရည်ညွှန်းလဲဆို လူ ပုဂ္ဂိုလ် ခြင်း လေးစားသမှုပြုတာပဲ။
(ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုတာ မိဘ၊မောင်နှမ၊ချစ်သူ၊သူငယ်ချင်း နဲ့ လုံးလုံး မဆိုင်တဲ့ ပက်သက်စရာလဲ မလိုတဲ့ ကိစ္စပါ)
ဒါတွေက သက်ဆိုင်သူခြင်း စာတိုက်ပုံး သော့တွေ ဖလှယ်တာကြတာတို့ ကိစ္စရပ်တွေမှာ စိတ်တူ သဘောတူ ဖ လှယ်ကြတာခြင်း ဆို ရင် တော့ ပြောစရာ စကားမရှိပါဘူး။ ဒါမှမဟုတ်ပဲ အားသာချက် အားနည်းချက်ကို ဖိပြီး ပိုင် ဆိုင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့။
ချစ်သူတွေ ကိစ္စပဲ အဓိက ပြောရရင် ကိုယ်ဟာ အတင်းအဓ္ဓမ ဆန်နေရင် ဘာနဲ့ တူမလဲ ? သူ့အပေါ်ကို ယုံကြည် မှု မရှိတာလား? ကိုယ် ကျင့်တရားကို စော်ကားတာလား ? နိုင်ထက်စီးနင်း လုပ်ချင်တာလား ? (သင်ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ထားတဲ့ ချစ်သူပါ)
သင့်အနေနဲ့ သင်ပြန်တွေးကြည့်ပါ (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဟာ ကောင်း၏ ဆိုး၏ပေါ့) လူသား တိုင်း တစ်ဦးခြင်း ဆီမှာ လျှို့ဝှက်သင့်တဲ့ အမှုဆိုတာ ရှိတတ်ကြတယ်။ (မဟော်သဓာ ဖြတ်ထုံးတစ်ခု ဖတ်ဖူးကြမှာပါ) ။
ဒီတော့ ဒီစာတိုက်ပုံး သော့ ကိစ္စကို သင်တို့ ဘယ်မြင်ကြသလဲ ?
17 ဝေဖန်ထားပါတယ်။ Links to this post
Tuesday, August 11, 2009 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 5:44 PM
အားလုံးပေါင်း သုံးကျပ်ကျတယ်...( သိပြီးသား )
နင့်ဖေကြီးက ရပ်ရွာအကျိုး သယ်ပိုးခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးက ရှိနေတော့...( အလိုက်သိတတ် ချင်ယောင်ဆောင် )
ဒီတော့ နင့်ကို တစ်ဝက်ဈေးနဲ့ ပေးလိုက်မယ်...( သဘောကောင်းတယ်ပေါ့ )
အဲ့အဲ့.... ကျန်တာကိုတော့ နောက်မှရှင်းတော့နော်...( အကြံနဲ့လေ )
Saturday, August 8, 2009 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 8:16 AM
အဲ့... လူတွေတယ်များပါလား ?
ထိုနေ့မှစ၍ ရုက္ခစိုး အိပ်မပျော်ခဲ့ပါ..
ယခုဆိုလျှင် ၄င်းအပိုင်စိုးသော ညောင်ညိုပင်မှာ...
ရွက်ဟောင်း နှစ်ဆယ့်တစ်ခါ ကြွေ၍
ရွက်သစ် နှစ်ဆယ့်တစ်ခါ ဝေခဲ့ပြီ....
လူတွေလူတွေက နီးလာလိုက် ဝေးသွားလိုက်...
အသံတွေအသံတွေက တိုးလာလိုက် ကျယ်လာလိုက်...
အင်း... တစ်ရေးလောက်တော့ အိပ် ဦးမှ...